Waxbarasho xagga barnaamijka dammaanad qaadka shaqada iyo horumarka ah
Haddii aad ka qeyb qaadatay jobb- och utvecklingsgarantin in ka badan 450 maalmood waxaad fursad u haysan kartaa in aad dhigatid yrkeshögskola, jaamacad ama folkhögskola. Waxaad aasaas ahaan u baahantahay in aad leedihid waxbarasho dugsi sare. Mararka qaarkood waa in xitaa aad dhigatay koorsooyin dugsi sare qaarkood si aad u heshid waxbarasho go’an.
Waxaan marka hore sameyneynaa qiimeyn ku aaddan waxbarashada loo baahanyahay si loo kordhiyo fursadahaaga ku aaddan in aad shaqo heshid. Markaas ka dib kaligaa ayaa raadsanaya waxbarashada.
Waxaad dhigan kartaa marka leysku daro 12 bilood oo waqti buuxa ah.
Waxbarashada marka lagu jiro barnaamijka saldhigashada
Waxaad barnaamijka saldhigashada ku dhex dhigan kartaa jaamacad ama etableringsprogrammet. Waxaad aasaas ahaan u baahantahay in aad leedihid waxbarasho dugsi sare. Mararka qaarkood waa in xitaa aad dhigatay koorsooyin dugsi sare qaarkood si aad u heshid waxbarasho go’an. Badanaa waxaad sidoo kale u baahantahay aqoon kugu filan oo xagga swiidhishka iyo ingiriiska ah.
Waxaan marka hore sameyneynaa qiimeyn ku aaddan in waxbarashadu ay kor u qaadeyso fursadahaaga ku aaddan in aad shaqo heshid. Markaas ka dib kaligaa ayaa raadsanaya waxbarashada.
Wadda fudud oo loogu tala galay adigaaga Swiidhan ku cusub
Haddii aad Swiidhan ku cusubtihid, aadna khibrad ama waxbarasho u leedihid xirfad ay jirto baahi weyn oo shaqaale loo qabo waxaad fursad u heli kartaa in aad suuqa shaqada u qaaddid waddo dhakhsi badan. Iyadoo leysku darayo ansaxin ku aaddan kartidaada aqoon- iyo khibradeed, tababar shaqo, tababar luqadeed iyo waxbarasho ku habboon baahidaada ayaad si dhakhsi ah shaqo u heli kartaa taasoo aqoontaadi iyo khibraddaadi hore aad ku isticmaali kartid.
Waxaa taas loogu yeeraa snabbspår waxay jirtaa iyadoo loogu tala galay macallimiinta, darawal baabuurta xamuulka qaadda, saraakiisha xagga dhismada, shaqaale xagga warshadaha qoryaha ah, kookayaal iyo xagga daryeelka caafimaadka iyo bukaanka. Waxbarashadu wey kala dhaadheertahay iyadoo ku xiran hadba xirfaddu ay khuseyso.
Waad heli kartaa taageero dhaqaale inta aad wax ku dhex dhiganeysid wax ka mid ah barnaamijyadeenna. Waxaad heli kartaa lacag kaalmo ah oo aktivitetsstöd, utvecklingsersättning ama etableringsersättning.